Voasambotra, niakatra fitsarana, omaly…: mpanao “bizina” fanafody dimy naiditra am-ponja | NewsMada
Ao anatin’izao ady amin’ny fihanaky ny valanaretina Covid-19 izao, raikitra koa ny ady amin’ireo mpanararaotra mivarotra fanafody tsy ara-dalàna. Nisy dimy no voasambotra ka naiditra am-ponja vonjimaika, taorian’ny niakarany teny amin’ny fampanoavana, omaly.
Anisan’ny miparitaka eran’ny Renivohitra amin’izao fotoana izao ny fivarotana fanafody tsy ara-dalàna nanomboka niparitahan’ny valanaretina Coronavirus andiany faharoa ity. Manararaotra izany trangan-javatra izany ny olona sasany ka mivarotra antsokosoko ireo karazam-panafody entina hiadiana amin’io aretina io. Tafiditra amin’izany ny Manezioma B6, ny Vitaminina C, ny Azythromycine. Tsy vitan’ny mivarotra tsy ara-dalàna, mbola manararaotra amin’ny vidin’ireo entana ireo koa ny mpivarotra izany. Nandray andraikitra ny eo anivon’ny fitondram-panjakana ka nijery ifotony sy nitsirika ireny karazan’olona minia manaparitaka fanafody eny anelakela-trano ireny. Vokatr’io, olona miisa dimy, efa tambajotra kely no sarona ka niakatra fitsarana, omaly. Efa fanaon’izy ireo ny mivarotra fanafody, saingy tsy manana fahazoan-dalana hanao izany izy ireo. Marihina fa samy nidoboka am-ponja eny Antanimora avokoa izy dimy ireo.
Mody marary ary maka fanafody…
Manararaotra milahatra eny amin’ny toeram-pitsaboana toy ny CSB II ireo olona sasany manao mody marary amin’izao fotoana izao ary maka fanafody. Tsy mihinana izany anefa ny ankamaroan’izy ireo fa amidiny amin’ny olona hafa ireo fanafody azony ireo. Noho io zava-misy io, tsy maintsy hohanina eo imason’ny dokotera ny fanafody omena ireo olona nahitana soratr’aretina amin’ireo CSB II sasany hisorohana izany. Mitohy kosa anefa ny ady ataon’ny fitondram-panjakana manoloana ireo olona mivarotra fanafody tsy ara-dalàna ireo ary efa misy paikady maty paika entina hanatanterahana izany.